चिनियाँ भाषाको मोहले पारेको आपत - China Radio International
चिनियाँ भाषाको मोहले पारेको आपत
(GMT+08:00) 2014-09-02 17:23:47
एक वर्ष अगाडि चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो सीआरआईमा विदेशी विशेषज्ञका रुपमा काम गर्न चीन आउने अवसर पाएँ। त्यतिबेला काठमाडौँमा मलाई साथीहरुले सानोतिनो पार्टीको आयोजना गरेर विदाई भोज दिएका थिए।
विदाई भोजका बेला साथीहरुले मलाई भनेको कुरा अहिले पनि झल्झली सम्झन्छु। मेरा आदरणीय मान्यजनदेखि सहकर्मी र मभन्दा तलका सबैको अपेक्षा समान थियो। मैले व्यक्तिगत रुपमा चीनमा काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ तर साथीहरुले त्यसलाई उहाँहरुको पनि अवसर ठान्नु भएको थियो। अनि उहाँहरु सबैले मसँग एउटै अपेक्षा राख्नु भएको थियो।
उहाँहरुको अपेक्षा यस्तो थियोः अमेरिका, युरोप, जापान अथवा अष्ट्रेलिया गएको भए त्यतै सेटल हुने सुझाव दिने थियौँ। तर नेपालको घनिष्ट छिमेकी मुलुक चीन जानु अन्य मुलुक जानुभन्दा पृथक र महत्वपूर्ण छ। त्यसकारण चीनबाट फर्केर आउँदा हामीलाई केही ल्याउनु पर्दैन। नेपाली फुटपाथदेखि सुपरमार्केटसम्म छ्यास्छ्यास्ती चिनियाँ सामग्री पाइन्छन्। त्यसकारण चीनबाट फर्केर आउँदा राम्रोसँग चिनियाँ भाषा सिकेर आउनू। त्यो भाषाको ठूलो महत्व छ। त्यसबाट हामी सबैले फाइदा लिन सक्छौँ। अहिलेसम्म हाम्रो सर्कलमा राम्रो चिनियाँ भाषा जान्ने मान्छे कोही पनि छैन। बल्ल अब एकजना साथी हुने भयो चिनियाँ भाषा जानेको।
मैले पनि भनेको थिएः भैहाल्छ नि। चीनमा प्रायले अंग्रेजी बुझ्दैनन्। त्यहाँ गएपछि चिनियाँ भाषा नसिके खैरात छैन। स्वाभाविक रुपमा चिनियाँ सिकिन्छ अनि फटट बोल्ने भएर आइन्छ।
यतिबेला एक वर्ष पूरा गरेर नेपाल फर्किने बेला भएको छ। अनि साथीहरुलाई के उपहार लाने होला भनेर गम्दै गर्दा ती साथीहरुको वाणी कानमा गुन्जन थाल्यो। अनि गन्न थालेँ मैले चीनमा कतिवटा चिनियाँ भाषाका शब्द सिकेँ। निहाउ, चाइ चेन, सेसे। त्यसपछि त नास्ति।
हैन मैले एक वर्षमा जम्मा तीनवटा चिनियाँ शब्द मात्र सिकेँ त? आफैँ छक्क पर्दैछु। केही दिन अगाडि मात्र एकजना साथीले नेपालबाट भाइबरमा फोन गरेर चिनियाँ भाषा त फरर आउँछ होला है? भनेको कुरा पनि सम्झन थालेँ। अनि आफैँलाई प्रश्न गरेँ किन सिकिन मैले चिनियाँ भाषा?
अफिसमा नेपाली भाषा बाहेक केही अनुवाद गर्नुपर्दा अंग्रेजी भाषाको आवश्यक पर्छ। सबै चिनियाँ सहकर्मीहरु नेपाली भाषामै लेख्ने, पढ्ने र बोल्ने गर्छन्। उनीहरुको काम नै चिनियाँ भाषाबाट नेपालीमा अनुवाद गर्ने हो। अफिसका सहकर्मीसँग चिनियाँ अथवा अर्को भाषामा बोल्नु पर्ने आवश्यकता परेकै छैन। आफू बसेको अपार्टमेन्टमा पचासभन्दा बढी देशका डेढसय जति विदेशीहरु छन्। त्यहाँ सबैले अंग्रेजी बोल्छन्। त्यहाँ पनि चिनियाँ भाषाको आवश्यकता परेन। अनि बाँकी रह्यो बजार र अन्य क्षेत्रको। बजारमा प्रायजसो सामानको मूल्य त्यहीँ लेखिएको हुन्छ। थपक्क सामान टिप्यो अनि काउन्टरमा पैसा बुझायो। कहीँ कतै मूल्य सोध्नु पर्‍यो अथवा बार्गेनिङ मार्केटमा गएर सामान किन्नु पर्‍यो भने चिनियाँले अंग्रेजी नजाने पनि सामान बेच्न जानेको हुन्छ। क्याल्कुलेटरले दोभाषेको काम गरिहाल्छ। अनि कहाँबाट सिक्नु मैले चिनियाँ भाषा?
तर पनि मैले चिनियाँ भाषा सिक्न नखोजेको चाहिँ होइन। चिनियाँ भाषा सिक्दा अथवा बोल्न खोज्दा आइपरेका केही अवगाल र आपतका उदाहरणहरु राख्दैछु।
उदाहरण नं 1 शौचालय खोज्दा सुपर मार्केट
चीन आएको केही समय भएको थियो। मैले आधारभूत कुराहरु टिपेर घोकेको थिएँ। एउटा रेष्टुरेन्टमा खाना खान गएँको थिएँ। मेरो साथमा अन्य दुईजना साथीहरु हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरु पनि चिनियाँ भाषाका लागि मठ्ठुराम। मलाई पिसाब लाग्यो। अनि मैले रेष्टुरेन्टकी परिचारिकालाई सोधेँ 'होइर इज ट्वाइलेट?' दुईतीन पटक सोद्धा पनि उनले बुझिनन्। अनि मैले अंग्रेजीमा सोध्नुभन्दा ठुटे चिनियाँमै सोध्नु बेस भनेर सोधेँ 'छ्व सो चाइनार?' यसको अर्थ हुन्थ्यो शौचालय कहाँ छ। ती परिचारिकाले बल्ल बुझिन् र हाँस्दै चिनियाँ भाषामा केके भन्दै मलाई रेष्टुरेन्ट बाहिर निकालेर औँलाले बाटोको पारिपट्टि देखाइन्। हैन यत्रो ठूलो रेष्टुरेन्टमा शौचालय छैन? मनमा यस्तै कुरा खेलाउँदै थिएँ। ती परिचारिका रेष्टुरेन्ट भित्र पसिसकेकी थिइन्। मलाई लाग्यो चीनमा व्यावसायिक केन्द्रहरु ठूला ठूला हुन्छन्, सायद बाटो पारिपट्टिको भव्य महल पनि यही रेष्टुरेन्टको अफिस अथवा शाखा होला।
म रेष्टुरेन्टभन्दा अलिक अगाडि गएर आकासे पुलबाट बाटो काटेर ती युवतीले देखाएको महलमा पसेँ। भित्र पस्नासाथ मलाई थाहा भयो त्यो त सुपर मार्केट पो रहेछ। ए त्यो रेष्टुरेन्टमा जानेजति ग्राहकहरु शौचालय प्रयोग गर्न चाहिँ यही सुपर मार्केटमा आउने रहेछन् भन्ने सोचेँ। तर सुपर मार्केटको तीनवटा तला चहार्दा पनि ट्वाइलेट पत्ता लगाउन सकिँन। यता पिसाबले च्यापेर आफूलाई आपत पारिसक्यो उता रेष्टुरेन्टमा दुईजना साथीहरु खाना पर्खिएर बसेका छन्।
आखिर म त्यतिकै रेष्टुरेन्टमा फर्किएँ पिसाबले च्यापेर कक्रक्क पारेकै अवस्थामा। साथीहरुले हैन कता गायब भनेर मलाई गाली गरे। मैले चाहिँ त्यही केटीलाई हेर्दै मुरमुरिनु बाहेक केही गर्न सकिँन। त्यतिकैमा अर्को साथीले म पनि ट्वाइलेट जानु पर्‍यो कहाँ रहेछ भनेर मलाई सोध्यो। अब मैले के जवाफ दिने? मैले फेरि अर्की केटीलाई बोलाएर अंग्रेजीमै शौचालय कहाँ छ भनेर सोधेँ। उसले पनि बुझिन। त्यहीबेला अर्का एकजना चिनियाँ पुरुष त्यहाँ टुप्लुक्क आइपुगे। उनी पनि खाना खान आएका रहेछन्। हामीले अंग्रेजीमा सोधेको कुरा ती युवतीले नबुझेको उनले थाहा पाए र चिनियाँमा भनेछन्। युवतीहरुले मुख छोप्दै हामीलाई शौचालय देखाए। शौचालय त त्यही रेष्टुरेन्टको अर्कोपट्टि कुनामा रहेछ।
मैले अरु कुरा गर्नुभन्दा पहिले शौचालय जान चाहेँ किनभने मलाई आपत परिसकेको थियो। शौचालयबाट बाहिर आउँदा मलाई अगाध आनन्द लागिरहेको थियो। अनि मैले त्यही युवकलाई भनेँ, 'मैले अगि चिनियाँ भाषामा शौचालय कहाँ छ भनेर सोध्दा यो केटीले मलाई किन बाटो पारिपट्टिको सुपर मार्केटमा पढाई?' मेरो कुरालाई उसले चिनियाँमा अनुवाद गरेर ती युवतीलाई सोध्यो। अनि खै उसले के जवाफ दिई कुन्नि। ऊ त मजाले हाँस्न थाल्यो। पछि उसले मलाई अर्थ्याए पछि म आफैँलाई लाज लाग्यो। मैले चिनियाँ भाषा उच्चारण गर्दा सानो त्रुटिका कारण त्यस्तो भएको रहेछ। भन्नु पर्ने रहेछ 'छ सो चाइनार?' तर भएछ 'छ्वो श चाइनार?' जसको अर्थ हुने रहेछ सुपर मार्केट कहाँ नेर छ? चिनियाँ भाषामा छ सो भनेको शौचालय रहेछ अनि छ्वो श भनेको सुपर मार्केट रहेछ। हरे चिनियाँ उच्चारण!
उदाहरण नं2चुम्बन कि प्रश्न
एकपटक एकजना चिनियाँ साथीसँग म बजारमा डुलिरहेको थिएँ। ती चिनियाँ साथीको अंग्रेजी भाषा राम्रो भएकाले हामी मजाले गफ गरिरहेका थियौँ। फुटपाथमा एकजना चिनियाँ युवतीले एक अफ्रिकन व्यक्तिलाई खुब गाली गरिरहेकी थइन्। ती अफ्रिकन व्यक्ति काला जातिका भएकाले उनको अनुहारमा खासै फरक परेको थएन। हामी भएको भए चाहिँ त्यतिको गाली खाँदा कालोनिलो भएर अफ्रिकनजत्तिकै हुने थियौँ होला। तर अफ्रिकनले अरु कालो हुने ठाउँ नै थिएन। चिनियाँ युवती उनलाई कुटौँला झै गर्दै थिइन्।
अफ्रिकनको आँखा झट्ट ममा पर्‍यो। उनले मेरो सहयोग मागे। उनले मलाई अंग्रेजीमा भने 'मैले यी चिनियाँलाई बाटो बिर्सिएँ कृपया तपाईंलाई सोध्न सक्छु भनेको यिनी त नराम्ररी रिसाइन्। यिनी अंग्रेजी बुझ्दिनन्। मैले चिनियाँ मै सोधेको थिएँ। तर मलाई पनि चिनियाँ भाषा अलिअलि मात्र आउँछ।'
मलाई पनि चिनियाँ भाषा नआउने भए पनि मेरो चिनियाँ साथीले उसको कुरा सुनिरहेको थियो। उसले ती चिनियाँ युवतीलाई चिनियाँ भाषामा केके भन्यो। त्यो केटीले मेरो साथीलाई पनि रिसाएको भावमा कुरा गरी। अनि मेरो साथीले ती अफ्रिकनलाई सोधे 'ह्वाट डिड यु से इन चाइनिज?' अर्थात् तिमीले चिनियाँ भाषामा के भन्यौँ? उसले भन्यो 'मैले बाटो बिर्सिएकाले कृपया तपाईंलाई सोध्न सक्छु भन्ने कुरालाई चिनियाँमा 'छिङ वन नि?' भनेको थिएँ।' उसले अंग्रेजी भाषाको बीचमा उसले प्रयोग गरेको चिनयाँ वाक्यलाई घुसाएर भन्यो।
त्यसपछि मेरा चिनियाँ साथी र ती चिनियाँ युवतीले चिनियाँ भाषामा कुरा गरे। अनि ती युवती रातो अनुहार लगाउँदै हाँस्न थालिन् र भन्न थालिन् 'तुइपुछी तुइपुछी' अर्थात् माफ गर्नुहोस् माफ गर्नुहोस्। कुरा के भएछ भन्ने मलाई जिज्ञासा रह्यो।
मेरो साथीले भन्यो 'छिङ वन नि'का दुईवटा अर्थ रहन्छन्। छिङ भनेको कृपया हो भने वन भनेको सोध्नु र नि भनेको तपाईंलाई। अर्को अर्थमा छिङ र निको अर्थ त्यही भए पनि वनको अर्थ चाहिँ चुम्बन हुँदोरहेछ। ती युवतीले बाटोमै मलाई एउटा अफ्रिकनले कृपया तपाईंलाई चुम्बन गर्न सक्छु भनेको बुझेर रिसाएकी रहिछन्। हामी चारैजना हाँस्यौँ। अगाडिसम्म रिसाइ रहेकी चिनियाँ युवतीले ती अफ्रिकनसँग हात मिलाइन्। चिनियाँ भाषाको प्रयोगले कहिलेकाहीँ कुटाइ पनि खुवाउने रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो।
उदाहरण नं3बिपरीतार्थ
एक पटक मेरो कोठामा इन्टरनेटको समस्या भयो। मैले लबीमा गएर इन्टरनेट इन्टरनेट भन्दै मेरो कोठा नम्बर टिपाएँ र कोठामा आएँ। केहीबेरमै एकजना युवतीले मेरो कोठाको ढोका ढक्ढक्याइन्। मैले ढोका खोलेँ। उनले इन्टरनेट भनेको मात्र मैले बुझेँ।
मैले उनलाई बस्ने आग्रह गर्दै भनेँ 'छिङ च्वो।' अर्थात् कृपया बस्नुहोस्। उनले त अचम्म गरी मलाई हेरिन् र चिनियाँ भाषामा के के भन्न थालिन्। मैले उनले उच्चारण गरेका शब्दहरुमध्ये इन्टरनेट भनेको मात्र बुझेँ। मैले फेरि भने उहाँलाई बस्नुहोस्। मैले तीनपटक त्यसरी चिनियाँ भाषामा बस्नुहोस् भनेपछि उनी रातोपिरो भएर हिँडिन्।
कम्प्युटरमा एडीएसएल र कोठामा वाइफाई सेटिङ गर्न आएकी चिनियाँ स्टाफ फर्केपछि म अक्क न बक्क परेँ। यसपटक चाहिँ मेरो कुनै गल्ती छैन भनेर म पूर्ण विश्वस्त थिएँ। म केही बेरमा फेरि लबीमा गएँ र उही कुरा दोहोर्‍याएँ 'इन्टरनेट' 'इन्टरनेट'।
लबीमा रहेका स्टाफले ती युवतीलाई फोन गरे। एकै छिनमा ती युवती पनि आइपुगिन्। उनले के के भनिन् कुन्नि। मैले चाहिँ 'छिङ च्वो।' 'छिङ च्वो।' भनेको मात्र बुझेँ। उनीहरु मुखामुख गरेर अनौठो भाव प्रदर्शन गर्न थाले। संयोगबस एकजना हंगेरीका साथी आइपुगे। उनी अंग्रेजी र चिनियाँ दुवै भाषा जान्दथे। उनी पनि आफ्नो कोठामा भएको केही समस्या लिएर लबीमा आएका रहेछन्। मैले आफ्नो समस्या उनलाई राखेँ। मैले इन्टरनेट सेटिङ मिलाउन गएकी केटीले कामै नगरिकन फर्किएको पनि उनलाई सुनाएँ।
उनले चिनियाँ भाषामा उनीहरुलाई मेरो समस्या प्रष्ट्याए। उनीहरुबीचमा कुराकानी भएपछि हङ्गेरीका साथीले मलाई प्रश्न गरे 'ह्वाइ डिड यु से हर गो आउट?' अर्थात् इन्टरनेट सेटिङ मिलाउन गएकी केटीलाई तिमीले किन बाहिर जाउ भन्यौ?
हँ मैले कतिखेर भने बाहिर जाऊ भनेर। मैले बस्नुहोस् पो भनेको थिएँ त। मैले उनलाई स्पष्टीकरण दिएँ। थुइक्क भुद्धु यहाँ पनि मेरै गल्ती रहेछ। छिङ च्वो भन्नुपर्नेमा मैले छिङ चउ भनेछु। छिङ च्वो भनेको बस्नुहोस् हुन्छ भन्ने थाहा थियो तर मेरो उच्चारण बिग्रिएर छिङ चउ भएछ अर्थात् बाहिर जाऊ। मेरा लागि मात्र यस्तो जटिल हो कि अरुका लागि पनि जटिल छ चिनियाँ भाषा!
उदाहरण नं4लाजमर्दो
अलिअलि रक्सी पिउँदै गएपछि नेपालीले अग्रेजी बोलेजस्तै मलाई पनि अलिअलि चढाएपछि चिनियाँ बोल्न खुब रहर लाग्छ। एकपटक त्यस्तै भयो।
रेष्टुरेन्टमा खाना खुवाउन आमन्त्रण गरेकी चिनियाँ युवतीले प्रसङ्गबस अंग्रेजी भाषामा म त धेरै खाँदिन भनिन्। हामीले दुईतिन राउण्ड वाइन पिइसकेका थियौँ। मैले चाहिँ तिमी त लोभी रहिछौ भन्नका लागि चिनियाँ भाषामा पड्काइ दिएँ 'नि हन सिआवो छि।' मैले त्यसो भन्नासाथ उनको चेहराको रङ परिवर्तन भयो। उनले के भनेको के भनेको भनेर मलाई अंग्रेजीमा सोध्न थालिन्। मैले चाहिँ कत्ति न चिनियाँ जानेको छु भनेर उही वाक्य दोहोर्‍याइ रहेँ।
उनले मलाई भनिन् 'ह्वाट डु यु मिन? लेट मि एक्ल्पेन नि इङ्गिलस्' के भन्न खोजेको मलाई अग्रेजीमा स्पष्ट भन। उनलाई थाहा थियो मलाई चिनियाँ भाषा आउँदैन भनेर। अनि मैले अंग्रेजीमा भने तिमी त लोभी रहिछौ। मलाई मात्र खुवाउने। आफू चाहिँ नखाने।
उनले त्यसपछि मलाई भनिन् 'तिमीले चिनियाँ भाषामा लोभी शब्द भन्दा गलत शब्द प्रयोग गर्‍यौँ। त्यसको अर्थ राम्रो हुँदैन। कृपया यो शब्द कहिल्यै पनि प्रयोग नगर्नू। चिनियाँ केटीले तिमीलाई कुट्लान्।'
उनको भनाइले अलिअलि चढेको रक्सीको मात कता भाग्यो कता। त्यस्तो प्रयोग गर्नै नमिल्ने शब्द मैले के प्रयोग गरेँ भन्ने कुराले मलाई घोच्न थाल्यो। अनि सोधेँ 'मैले के नराम्रो शब्द प्रयोग गरेँ हँ? कृपया मलाई स्पष्ट भन्नुहोस् ताकि अर्कोपल्ट म त्यो गल्ती नदोहोर्‍याऊँ।'
लोभीलाई चिनियाँ भाषामा सियाओ छि भन्नु पर्नेमा मैले उच्चारण गर्दा सिआयो चिए भनेछु। सिआयो चिए भनेको यौनकर्मी महिलालाई प्रयोग गरिने शब्द रहेछ। मैले उनलाई तिमी लोभी रहिछौ भन्दा तिमी वेश्या रहिछौ भन्ने अर्थ पर्न गएछ।
'ओ माइ गड! मलाई माफ गर्नुहोला। मेरो आसय त्यस्तो हैन। अनि मलाई त्यो शब्द पनि थाहा थिएन।' मैले उनीसँग माफ मागेँ।
धन्न उनले मेरो मनसाय बुझिन् र मेरो भाषाको इररलाई सहज रुपमा लिइन्। उनले आफूले थोरै खानुपर्ने कारण पनि खुलाइन्। उनी वजन र शरीरको मोटाइ कम गर्नका लागि त्यसरी कम खाँदि रहिछन्। कसो आतिथ्य सत्कार नै शत्रुतापूर्ण हुनबाट जोगियो।
अब म नेपाल बिदामा फर्कँदै छु। साथीहरुले मलाई सोध्नुहोला चिनियाँ भाषा त फरर आउँछ होला नि। मैले के जवाफ दिने हो कुन्नि!
साभारः सेटोपाटी 2071 भदौ 16 （2014 सेप्टेम्बर 1）